Make a Report (Somali) - Crime Stoppers Western Australia
War bixin Samay
Waxaad caawin kartaa in bulshadaadu ahaato amaan adiga oo uga soo warbixinaya dembiga adiga oo aan isa sheegin ama dabeecadaha laga shakiyi karo qaabkaan ku warbixinta oline-ka. Xasuuso, macluumaad yar oo kastaa wax buu tarayaa – waxaad hayn kartaa macluumaadka maqan kaas oo caawimaya xalinta dembiga!
Ka qayb gal kumaankun dad ah ee WA kuwaas oo la soo xiriiray Dembi Joojiyayaasha si ay u soo gudbiyaan macluumaad wax ku oolla kaas oo caawimaya Booliiska WA si loo baaro dembi. Haddii kale, waxaad kaloo wici kartaa Khadka hotline-ka lacag la’aanta ah, 1800 333 000, si aad u warbixiso.
Ku noqo xalalka warbixinta
1 Soo gaabin
Goobtaan waxaa looga jeedaa qiimaynta waana in aan waxba lagu qorin.
Maxaad rabtaa inaad ku soo gudbiso warbixinta?
Fadlan u xulo si degan maadaama xulasho kasta oo hoos ku taallaa ay u baahan tahay in la bixiyo macluumaad ka duwan.
Dhaqdhaqaaq la xiriira daroogo
dhaqdhaqaaq kale oo dembiyeed
Dembi noocee ah ayaa warbixintaani la xiriirtaa?
Fadlan xulodab gelin WeerarDhacDembiga Saybarka Rabshada GurigaHawlaha daroogaHub/qaraxyoKhayaano/been abuursawir gacmeedHaynta waxyaalla la soo xadayXadid badeedQof la la’yahayQof dil geystaywaxyeelida hantiDhicidGaf galmooddhimasho laga shakisan yahayDhacGafka wadadaGaari Xadida Qof la raadinayoDhaqdhaqaaq shaki lehKuwa kale kale
*Fadlan ka bixi macluumaad faahfaahsan waxaad aad jeclaan lahayd inaad ka hadasho
Faahfaahintaani waa muhiim – wixii dhacay, marka waxaasi dhaceen iyo meeshay ka dhaceen?
*Fadlan bixi macluumaad faahfaasan oo ku saabsan hubgacmeed/yada aad jeclaan lahayd inaad ka warbixiso.
Faahfaahintaasi waa muhiim. Fadlan sharax sidaad ku ogaatay macluumaadkan kaas oo ay ku jirto aqoon kasta oo la xiriirta hubgacmeedka siday iyaga gacantooda ku soo gashay.
Warbaahinta + soogelinta faylka
Soogeli sawir walba oo ku lug leh ama faylalka.
Sawir walbaa waa in uu le’egyahay 5MB.
Waad la soo bixi kartaa 5 fayl
nooca faylasha la ogol yahay: jpg, jpeg, png, tiff, pdf, doc jpg, jpeg, png, tiff, pdf, doc
SOO GELI MID KALE
Arrintani ma hal mar uun bay dhacday?
Goorma ayay dhacday?
Qiyaas ahaanku jaango’an
Haddii aanay mar uun ahayn, intee jeer ayay dhacdaa ama dhacday?
Dhowr jeer asbuucii
Dhowrkii asbuuc oo kasta
Fadlan geli kays nambarka haddii aad taqaan
Nambarkaan waxaa loo isticmaalay inta u dhexaysa Xaalladaha Furan qayb ka mid ah websaytkayaga Galbeedka Australiya Bogga Dembi Joojinta waxaa la daabaacaa Arbaca walba.
Ma samaysay warbixin la xiriirtaa arrintaan?
Fadlan geli ID-ga warbixintii hore haddii aad hayso
Sii wad Sii wad dhammeystir
Intaas uun ayaad ogtahay waxaadna jeclaan lahayd inaad soo gudbiso warbixintaan.
2 Goobta iyo faahfaahinta dhacdada
Guri gaar loo leeyahay
Kuwa kale kale
Xaggee waxani ka dhaceen?
Fadlan bixi nambarka guriga, wadada iyo macluumaadka xaafada haddii la helli karo
Fadlan bixi macluumaad siyaada ah oo ku saabsan goobta
Fadlan bixi URL iyo/ama raad, haddii ay jiraan. Fadlan samay tixraac iskiriin kasta oo aad ku dartay media-da + soogelinta faylka
Ma waxaad ugu malaynaysaa inay gadayaan daroogo?
Ma maxay iibinayaan/qaybinayaan immisa ayuuse le’egyahay
Goobtaan mayay ku hayaan daroogada?
Cayin meesha, hadii aad ogtahay
Hub ma ugu jiraa goobtaan?
Hub/hubab noocee ah?
Hubgacmeed/yada noocee ah ayay haystaan?
Fadlan qor cidda samaysa iyo moodalka hub gacmeed walba (hal layn midkiiba)
Fadlan qeex astaama mucayina oo walba sida diirada, waxyaallaha ku xiran, maqaasiinada, boorsooyinka lagu qaado iwm
Fadlan cadday nooca hubka/hubabka ah
Meeshaan lacag badani ma u taallaa?
Sii wad dhammeystir
3 Faahfaahinta Dadka iyo Gaadiidka
Ma aragtay qof laga yaabo inuu ka qaybinayo daroogo goobtaas?
Gaari ma wataan?
Ilaa intee qof ayaa oo ku jira hawsha daroogada oo yimaada goobta ama ka taga?
Fadlan bixi qeexitaan kasta oo dadka iyo/ama gawaarida xiriirka la leh warbixintaan. Intuu doono macluumaadku ha le’ekaado waa macluumaad muhiima.
Magaca , haddii la yaqaan
Fadlan qeex sida qofkaasi u egyahay
Kan waxaa ku jiri kara sinjiga qofka, muuqaalka, taatooga, lebiska, durnaanta dhegaha, dabeecada iwm.
Doorka qofkaas la xiriira warbixinta
Haddii ay khusayso.
Gaari noocee ah ayay isticmaalaan, haddii mid jiro.
Ma leeyahay astaan gaara sida diisnaan, wax ku xiran, wax lagu qurxiyey, nabar ku yaalla, wax uu jiidanayo iwm.
MID KALE KU DAR
2 Faahfaahinta dadka iyo hubgacmeedka
Fadlan bixi sharaxaad kasta oo aad awoodo oo ku saabsan dad iyo/ama faahfaahinta hubka la xiriira warbixintaan. Iyada oo aan ku xirnayn yaraantiisa, waa macluumaad wax ku oolla.
Waa maxay magaca/naanaysta loogu yeero qofka haysta hubka/hubabka?
Fadlan bixi macluumaad ku saabsan goobta
Fadlan bixi goobtat mucayinka ah, haddii aad awoodo.
43 Faahfaahinta ugu dambaysa
Waxaan rabaa in aan ahaado gebi ahaan qof aan la aqoon Haddii aadan na siin macluumaadkaaga, ma awoodi doono in aan kula xiriiro si loo caddeeyo faahfaahinta.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan siiyo faahfaahinta Crime Stoppers-ka iyo baarayaasha booliiska Haddii aad na siiso faahfaahintaada, waxaanu la shaqayn karnaa booliiska si loo xaliyo arrimaha aad soo sheegtay.
Warcelinta iyo cusboonaysiinta
Fadlan ogsoonow in horumarka wixii cusub oo ku saabsan warbixinta dembiga lama bixin karo sababa amaanka dartiis.
Barnaamij (haddii ay khusayso)
Waxaan u samaynayaa warbixintaan sababtoo ah guud ahaan waxay la xiriirtaa ka qaybgalkayga barnaamijka soo socda:
Magaca lala xiriirayo
Iimaylka laygala xiriirayo
Telefoonka laygala xiriirayo
Wax ka dhihid
Tusaale ahaan, haddii aad jeclaan lahayd inaad dhaafto farriin ah cod ama aad jeclaan lahayd inaad muujiso waqtiga kugu haboon ama maalinta aan ku soo wacayno adiga.